नेताले हात हालाहाल गरेको त्यो कार्यक्रम : पछि के भयो ?
पछिल्ल्लो समय टेलिभिजन टक साेमा कुनै न कुनै फन्डा भइरहेको हुन्छ । कतै प्रस्तोताका कारण त कतै अतिथिका कारण ।
हालै मात्र एभिन्युज टेलिभिजनको ‘सकस राजनीति’ भन्ने कार्यक्रममा प्रस्तोता सुशील पाण्डेले ‘अशिष्ट शैलीमा प्रश्न गरेको’ भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कार्यक्रम नसकिँदै उठेर हिँडे ।
यसअघि २७ वैशाखमा अर्थात् गत शुक्रबार प्राइम टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रमको भिडियो भाइरल बनेको छ ।
ऋषि धमला कुनै न कुनै रुपमा चर्चामा आइरहने पात्र हुन् । पछिल्लो साता उनी फेरि एउटा अन्तर्वार्तामा बोलाइएका अतिथिका कारण चर्चामा छन् । प्राइम टेलिभिजनबाट शुक्रबार राति प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सत्यनारायण मण्डल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले झगडा गरे । ‘चोर’ ‘डाका’ सम्मको शब्द प्रयोग गरे ।
अरुबेला अतिथिलाई कमै बोल्न दिने धमलालाई त्यो दिनचाहिँ दुई नेताले बोल्नै दिएनन् ।
दुई नेता झगडा गर्न थालेपछि कार्यक्रम प्रस्तोता धमलाले पटक–पटक भने, ‘बस्नुस्, चुप लाग्नुस् ।’ तर, अतिथिचाहिँ उठबस गर्दै बाझिरहेका थिए ।
कार्यक्रम सकिन केही मिनेट बाँकी नै थियो । मण्डल र यादव ‘चोर’ ‘डाका’सम्मका शब्द प्रयोगमा उत्रिसकेका थिए । झन्डै दुई मिनेटदेखि चुप लाग्नुस्, बस्नुस् भनिरहेका धमलाले यसपटक भने, ‘म तपाईंहरुलाई हात जोडेर भन्छु, सभ्य हुनुस्, शिष्ट हुनुस्, बौद्धिक बहस गर्नुस् । देश र जनताका लागि बहस गर्नुस् ।’
धमलाले यसो भन्नेबित्तिकै सत्यनारायण मण्डल दाहिने हात फिँजाएर ‘यस्ता जा..’ भन्दै उठे । चलाख धमलाले त्यतिबेलै मण्डलसँग हात मिलाए र कार्यक्रम सके । युट्युब ट्रेन्डिङमै रहेकाले कार्यक्रम अवधिभर के भयो, त्यो भिडियोमै हेर्न सकिन्छ ।
झन्डै हात हालाहाल गरेका दुई नेता कार्यक्रम सकिएपछि बोले कि बोलेनन् ? कि अझै बाझे ? धमलाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे होलान् ? धेरैमा यस्तो जिज्ञासा हुन सक्छ ।
कार्यक्रम सुरु हुनुअघि
जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा धमलाले धेरैजसो एक जना मात्रै अतिथि बोलाउँछन् । २७ वैशाख राति ८ बजेको कार्यक्रममा भने धमलाले नेकपाका सत्यनारायण मण्डल र कांग्रेसका रामकृष्ण यादवलाई बोलाए । दुवै नेता तराई मूलका हुन् । मण्डल सप्तरीका हुन् भने यादव धनुषाका हुन् ।
८ बजेको कार्यक्रम बोलाइए पनि मण्डल बानेश्वरको कात्यायनी चोकस्थित प्राइम टेलिभिजनको कार्यालयमा ७ बजे नै पुगे । धमलाले रामकृष्णसँग भिँडाउँदै छन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन । यो कुरा मण्डलले त्यतिबेला मात्रै थाहा पाए, जब पौने ८ बजे रामकृष्ण प्राइम टेलिभिजन छिरे । त्यसो त, रामकृष्णलाई पनि धमलाले यो कुरा थाहा दिएका रहेनछन् । दुवै नेताले हात मिलाए ।
यसअघि पनि दुई नेता अर्को एक टेलिभिजनमा झगडा गरिसकेका थिए । त्यसैले उनीहरु खुलेर बोलेका भने थिएनन् ।
सत्यनारायण ‘रेस्ट रुम’ गएको मौका पारेर रामकृष्णले धमलाको कान फुके, ‘कार्यक्रममा म एक्लै जान पाए हुन्थ्यो ।’ धमलाले मिल्दैन भने ।
त्यसपछि रामकृष्ण स्टूडियो छिरे । अब मण्डल आएर धमलालाई भन्न थाले, ‘किन यो मान्छेसँग मलाई भिँडाउन खोजेको ? मेरो छुट्टै कार्यक्रम गर्नू ।’ धमलाले ‘केही हुन्न, बौद्धिक बहस गर्ने हो’ भनेर मण्डललाई पनि स्टूडियो भित्र्याए ।
यसपछि के भयो ? भिडियोमा हेर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रम सकिएपछि के भयो ?
कार्यक्रम सकिएपछि मण्डल धमलासँग झाेकिए । ‘मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, म रामकृष्णसँग बस्दिनँ । यस्ता मान्छेसँग मलाई किन राखेको ? जसलाई बोल्न आउँदैन, कुनै राजनीतिक विचार छैन,’ त्यसपछि धमलाको कुरा नसुनी उनी हिँडे ।
निकै उत्साहित हुँदै प्राइम छिरेका मण्डल आक्रोशित मुद्रामा त्यहाँबाट निस्किए ।
रामकृष्ण भने धमलासँग कुरा गर्न थाले । उनले पनि असन्तुष्टि पोखे, ‘यी मान्छे रिसाहा छन्, मैले तपाईंलाई कार्यक्रमभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ ।’
आफ्नो कार्यक्रममा यस्ता खालका बहस सामान्य भन्दै धमलाले त्यसलाई सामान्य रुपमा नै लिन आग्रह गरे ।
केहीबेरपछि रामकृष्ण पनि त्यहाँबाट बाहिरिए । आइतबारसम्म झगडाको भिडियो भाइरल बनिसकेको थियो । आइतबार बिहान रामकृष्णले धमलालाई फोन गरेर भने, ‘ऋषीजी कार्यक्रम त निकै हिट भएछ, मलाई धेरै फोन आइरहेको छ, शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका छन् ।’
तर, मण्डलले भने धमलालाई सम्पर्क गरेर थर्काए, ‘तपाईंको कार्यक्रममा आउनु नै गल्ती भएछ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०१:१६:००